Saraakiil katirsan Milatariga Soomaaliya oo gaaray Deegaanka Bohol iyo Wadahadalo socda | Allbanaadir.com
Home GALMUDUG Saraakiil katirsan Milatariga Soomaaliya oo gaaray Deegaanka Bohol iyo Wadahadalo socda
Saraakiil katirsan Milatariga Soomaaliya oo gaaray Deegaanka Bohol iyo Wadahadalo socda
Saraakiil katirsan ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen deegaanka Bohol ee dhaca duleedka magaalada Dhuusomareeb, halkaas oo fariisin u ah ciidankii Ahlu Sunna ee ka baxay magaalada Guriceel.
Sida aan wararka ku heleyno saraakiisha gaartay Bohol waxaa hogaaminaya General Aadan Abshir Nuure oo ah taliyaha ururka 6-aad ee guutada 60-aad ee Ciidamada Xoogga Dalka Soomaliyeed kaa oo dhawaan gaaray Galmudug.
Sargaalkan katirsan milatariga Soomaaliya iyo xubnaha la socda ayaa kulamo la qaatay saraakiil katirsan Ahlu Sunna, waxa ayna kawada hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafkii dhaliyay in dagaal dhiig badan ku daato ka dhaco Guriceel.
Ciidamada Ahlu Sunna ayaa hada ku sugan iskuna aruursanaya deegaanka Bohol ee dhaca duleedka Dhuusomareeb, waxa ayna Ahlu Sunna dooneysaa in wadahadal iyo gor gortan la gasho maamulka Galmudug.
Madaxweynaha Galmudug Qoor Qoor ayaa horey uga biyo diiday in wadahadal la galo hogaanka Ahlu Sunna, waxa uuna door biday in kooxdaasi kula galo Guriceel dagaal dhiig badan ku daatay, lamana oga in wadahadalkan bilowday Galmudug raali ka tahay.
Previous articleJubbaland oo Eedeyn kulul u jeedisay DF uguna baaqday in faragalinta ka deyso
Next articleImaaraadka iyo Sacuudiga oo caddeeyey mowqifkooda ku aadan afgambiga Sudan